चर्चित कलाकार रबि कार्कीको ‘‘बेनी बजारमा झर मायालु…’’ भिडियो सार्वजनिक ! – ebaglung.com
चर्चित कलाकार रबि कार्कीको ‘‘बेनी बजारमा झर मायालु…’’ भिडियो सार्वजनिक !
२०७३ फाल्गुन १३, शुक्रबार १६:४९	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, मनोरञ्जन, विविध
म्याग्दीका चर्चित कलाकार रवि कार्की हँसाउन देखी फसाउन सम्म माहिर !
खगेन्द्र विश्वकर्मा, म्याग्दी (बेनी) २०७३ फागुन १३ । म्याग्दी बेनी नगरपालिका न्याप्टेचौरमा जन्मेका रवि कार्की अहिले हास्य कलाकारको रुपमा परिचित बन्दै गएका छन् । उनले धौलागीरी टेलिभिजनबाट हाँस्य तथा मनोरञ्जनात्म कार्यक्रम तिमी र म तिन छक्कै, साईलो बाजेको आगन कार्यक्रम संचालन तथा अभिनय गर्दै आएकाछन् ।
उनले यस भन्दा पहिले म्याग्दीको एफ एम रेडीयोमा ५ बर्षसम्म लोक संस्कृति झल्कने खालको कार्यक्रममा जोडिएर लोक गीतका कार्यक्रम तथा हास्य मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । यसरी आफुलाई कलाकारिता र हास्य विधामा जोडिएर काम गर्दै आएका उनले यही फागुन ११ गते म्याग्दीमा बेनी बजारका भद्र भलाद्मी तथा प्रशासक, कलाकार तथा पत्रकारको विचमा बेनी बजारको रुची चलचित्र मन्दिरमा म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भिडियो क्लिक गरेर सार्वजानिक गरेका थिए ।
भिडियो सार्वजनिकीसंगै चलचित्र मन्दीर पन्चेबाजाले गुन्जाएमान बनेको थियो नै त्यसैमा हाँस्य कलाकार रवि कार्की आफै गीत गाएको दर्शकले देखे उनले गीतको थेगो समेट बनाएका रहेछन् । जसलाई उनले आफ्नो पहिलो गीत पन्चेबाजा बेनी बजारमा झर मायालु नाम दिएका छन् ।
पछिल्लो बैशालु प्रेम विवाहका कुरा फोनबाट गर्ने विषय बस्तुलाई जोडेर बेनी बजारमा झर मायालु मेरै भरपर मायालु, आउदाखेरी फोन गर मायालु थेगो र लय बनाएका हुन । यसगीतको शव्द प्रविण खत्रीले लेखेका छन् । स्वर रवि कार्की र देवी घर्तीको रहेको छ भने भिडियोमा प्रकाश भट्टको निर्दैशन तथा अभिनय र अन्जली अधिकारीको मूख्य अभिनय रहेको छ ।
म्याग्दीको मगर समुदायमा नाँचिदै आएको थाली नाचलाई प्रमुख आकर्षणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । थाली नाचमा सोनिया पुन र मकु मगरले थाली नाच देखाएका छन् । अभ्यास डिजीटलबाट म्युजिक नेपालको युटुवमा सार्वजनिक गरेको छोटो समयमानै अहिले अग्रणी स्थानमा रहेको छ ।
चर्चामा रहेको हास्य कलाकार हुन रवि कार्की उनी, सानै उमेर देखी कलाकारितामा रुचि भएको र विभिन्न विद्यालय तथा स्थानीय कार्यक्रमहरुमा अभिनय गरेर दर्शकलाई मन्त्रमुक्त बनाउथे ।
२०७२ सालमा जनन नाट्य समुह म्याग्दी गठन गरेर त्यसको संस्थापक अध्यक्ष भएका हुन उनी । अभिनयको क्षेत्रमा काम पनी गरे र उनी अध्यक्ष पदमा पुगे कला र संस्कृतिले मान्छेको दैनिकीलाई बदलिदिएर खुसी बनाउने आफैमा कठिन कार्य हुदा हुदै पनी आफु विभिन्न कार्यक्रममा मलाई दर्शकले माया र हौसला पाएपछी अभिनयको हास्यविधालाई अंगालेर छोटो समयमा चर्चाको नाम बनेको हाँस्य कलाकार रवि कार्की हुन । यसर्थ रवि कार्की हसाउन देखी पन्चेबाजा गीतमा फसाउन तयार रहेको गीतमा प्रस्तुत छ । काउँलेगौडा युवाक्लव बेनपा ९ घतानले बेनीको रुचि चलचित्रहलमा मंगलबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले भिडियो क्लिक गरेर विमोचन गर्दै कला र संस्कृतिको संरक्षरणमा युवा पुस्ता जागरुक हुनपर्ने बताएका थिए।
यस्तै कार्यक्रममा प्रहरी नायब उपरीक्षक बशुन्धरा खड्का म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जीवनवहादुर विश्वकर्मा,लोकदोहोरी प्रतिस्ठान म्याग्दीका अध्यक्ष कृष्ण जिसी लगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । गायक वसन्त थापा,अमित विश्वकर्मा,पदम विश्वकर्मा लगायत अन्य कलाकारहरुले साँङ्गीतिक प्रस्तुती दिएका थिए ।
कार्यक्रम चिन्जीवी सुवेदीको अध्यक्षता,प्रविण खत्रीको स्वागत र तेजेन्द्र बानियाँको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
स्वर्गीय श्रीमान संग फोनमा बोल्छिन उनी, भन्छिन यो नानी उनकै हो !